Sidee ayey u muuqan doontaa SHAXDA kooxda Barcelona haddii lagu daro De Jong, De Ligt iyo Griezmann?? – Gool FM
(Barcelona) 18 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la filayaa inay saxiixyo waa weyn sameyn doonto suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, iyadoo la shaaciyey haatan sida ay u muuqan karto shaxdeeda xilli ciyaareedka soo socda haddii lagu daro De Jong, De Ligt iyo Antoine Griezmann.
Barcelona ayaa ku guuleysatay horyaalka La Liga labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyeyey, kooxda Catalan ayaana u baahan ugu yaraan saddex saxiix oo cusub si ay kal ciyaareedka soo aaddan tartan ula gasho Real Madrid oo is weyn isku qalabaysay.
Waxa ay Barca horayba heshiis ula gaartay laacibka khadka dhexe ee Ajax, Frenkie de Jong kaasoo lacag weyn ugu soo dhaqaaqay garoonka Camp Nou, waxaana la filayaa in xiddigo magac sare leh ay la soo wareegi doonta Barcelona inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Shaxda kooxda koowaad ee macallin Ernesto Valverde ayaa la la xiriirinayaa in lagu soo dari doono xiddigo ay ka mid yihiin kabtanka Ajax ee Matthijs de Ligt iyo Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid u sheegay inuu tagayo ee Antoine Griezmann.
Madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu waxaa ka go’an inuu xiddiga xulka qaranka France ee Griezmann keeno Camp Nou, si la mid ah De Ligt oo la filayo inuu De Jong kula soo biirayo Spain, inkastoo muddooyinkii dambe la la xiriirinayey saxiixa 19-sano jirkaan kooxda Paris Saint-Germain.
Yeelkeede shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa sii shaacisay sida ay u muuqan doonto shaxda kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo socda haddii ay labadaan saxiix ee Matthijs de Ligt iyo Antoine Griezmann dhammaystiraan isbuucyada soo aaddan.